PressReader - Isolezwe: 2017-10-13 - Ithemba kuBabes Wodumo ngeMTN 8
Ithemba kuBabes Wodumo ngeMTN 8
Isolezwe - 2017-10-13 - IZINDABA - NHLANHLA SITHOLE
AMATHEMBA abaphathi bePremier Soccer League nabaxhasi beMTN 8, aselele kuBabes Wodumo noL’vovo Derrango ngokuthi babatakule obishini ababhajwe kulona lokudonsa abalandeli ukuthi bazobuka umdlalo wamanqamu phakathi kweCapeTown City neSuperSport United eMoses Mabhida Stadium, kusasa ngo-7 ebusuku.
ULuxolo September, obhekene nezokuxhumana kwiPremier Soccer League (PSL) utshele Isolezwe ukuthi bahlele idili lomculo elizoqala ngo-4 ntambama elibophele uBabes Wodumo, L’vovo Derrango nabanye abazonandisa ngaphambi kokuthi kuqale umdlalo omkhulu.
“Ngaphandle kokuthi lona ngumdlalo wamanqamu, abaxhasi babone kukuhle ukuthi babe nedili lomculo ukuze abalandeli kube nento abayohlale beyikhumbula ngalo mdlalo.
Kunendawo ehlelelwe abalandeli abazobe behamba nemindeni, izingane zizothola ithuba lokudlala imidlalo enhlobonhlobo, ngesikhathi zisalinde ukuqala komdlalo,” kuchaza uSeptember.
USeptember walile ukusho ukuthi mangaki amathikithi asedayisiwe.
“Sinethemba lokuthi abantu baseKZN ngeke basiphoxe ngoba bayaziwa ukuthi ibhola bayazifela ngalo, yingakho nje nabaxhasi bekhethe iTheku,” kusho uSeptember. UVusi Mazibuko oyimenenja jikelele eMoses Mabhida uthe ezokuphepha zizobe ziqinile ngoba emdlalweni wokugcina obuphakathi kweKaizer Chiefs neBaroka abalandeli bazama ukuphula izihlalo ngenxa yokungeneliseki ngomqeqeshi weChiefs uSteve Komphela.
Isithombe: ZWELIZWE NDLOVU
UMREPHA wakuleli uKwesta ukhiphe ingoma entsha nowase-United States of America, uWale
UMCULI wekwaito uL’vovo Derrango kulindeleke ukuthi ashaye izingoma adume ngazo uma esenandisa kowamanqamu eMTN 8 eMoses Mabhida Stadium kusasa ebusuku
ABAPHATHI bePremier Soccer League nabaxhasi beMTN 8 bathembele kuBabes Wodumo ukuthi ahehe abalandeli bebhola kowamanqamu eMTN 8 eMoses Mabhida Stadium kusasa